Breziliana city-trano ny vehivavy, mitady lehilahy tokan-tena
Mino aho fa maro ny olona ao amin’ny nofinofy sary an-tsaina ny nosy tanteraka ny mponina amin’ny vahiny ny vehivavy.
Ao ny sasany, ny fanajana, ny toy izany toerana misy dia tanàna any Brezila. Ity tarehy paritany tanàna tao an-tendrombohitra ny mponina ary saika voafehy ihany ny vehivavy. Lahy no alefa lavitra any, sy ny fianakaviany dia tsy azo atao ao an-tanàna, afa-tsy ny faran’ny herinandro. Ary ny vehivavy no nanapa-kevitra fa izy ireo no mila vitsivitsy monja ny lehilahy tao an-tanàna. Fa misy iray fampitandremana: ny olona dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika.
Angamba tsy tokony ho sarotra loatra
Ny olona rehetra dia tsy maintsy manaraka ny lalàna rehetra sy ny didy izay nanorina ny vehivavy avy any an-tanàna mikasa ny fambolena, ny fivavahana sy ny maro hafa. Mba hahatakatra ny antony toy izany dia ny tanàna misy, izany no ilaina hianatra ny tantara: ny tanàna naorina eo amin’ny Signorina Maria de Lima, izay excommunicated noho ny fanitsakitsaham-bady izy rehefa nandositra ny olona, izay izy dia terena hanambady. Tamin’ny farany, dia tonga nanatevin-daharana ny hafa ny vehivavy tokan-tena ary fianakaviana tarihin’ny vehivavy, ary noho izany dia misy dia mikatona ny fiaraha-monina. Ny mpitandrina ny Fiangonana Evanjelika, Anisio Pereira, dia naka iray taona vavy ho vadiny sy nanorina ny Fiangonana teo, ny fanorenana hentitra Malaza fitsipika. Rehefa maty izy, ny vehivavy tao an-tanàna efa tapa-kevitra fa handeha tsy ho tonga zanako lahy sy fanapahana, ary noravana Pereira ny Fiangonana. Mponina Nelma Fernandes, telo amby roa-polo taona, hoy ny lehilahy Ihany isika tokan-tena ny ankizivavy hihaona ireo na manambady na manana fianakaviana manana fifandraisana amin’ny antsika.
Isika rehetra nofy ho raiki-pitia, ary mahazo manambady
Fa tianay ny monina eto izahay, ary tsy te-handao ny tanàna mba hitady ny vadiny. Raha toa ianao ka liana amin’io tanàna mahafinaritra amin’ny mafana Breziliana tovovavy afaka manandrana mba hitsidika ity tranonkala ity. Saingy tsy mieritreritra afa-tsy ianao no manan-tsaina satria, toy ny tanàn-dehibe Amazons tany ny vaovao, ny toerana maharitra lainga. Noho izany, ry zalahy, buy fiaramanidina tapakila, ny entana ny kitapo ka mandehana Breziliana tovovavy no miandry Anao
← Anarana ao Brezila (Breziliana version)
Mpandika teny Breziliana ao an-tserasera Breziliana →